फेरि एकैचोटी ५३ संक्रमित थपिए, संक्रमित यी जिल्लाका हुन् : हेर्नुहोस्
May 18, 2020 1802
नेपालमा कोरोना संक्रमित’को संख्या थपिने क्रम ती’ब्र बनेको छ । आज दिउँसो मात्र ५३ संक्रमित थपिए’का छन । विहान मात्र ९ संक्रमित थपिएको नेपाल’मा दिउँसो पुनः ५३ संक्र’मित थपिदा संक्रमित’को संख्या ३ सय ५७ पुगेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय’मा आज आयोजि’त पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर विका’स देवकोटा आज दिउँसो एकै पटक ५३ संक्रमित थपिएको जानकारी दिनुभयो ।
बाँकेको विस्फो’टक तथ्यां’क
बाँके जिल्लामा एकैदि’न ४७ जनामा कोरो’ना पुष्टि भएको छ । ४६ पुरुष र १ जना महिला गरी ४७ जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको हो ।
भेरी अस्पतालस्थित प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा बाँकेको नरैनापुर क्षेत्रका ४७ जनामा कोरोना पोजे’टिभ भेटिए’को जनाएको छ । आइतवार विहान कोरानाका कारण एक जना २५ बर्षीय पुरुषको मृ’त्यु भएको थियो । पुरुष बैशाख ३० गते भारतबाट आएका थिए ।
यो भन्दा अगाडि नरैनापुरबाटै ८ जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो । उनीहरुको कन्ट्याक्ट ट्रेसि’ङग गर्दा थप ४७ जनामा को’रोना पोजेटिभ भेटिएको भेरी अस्प’तालले जनाएको छ ।
उहाँका अनुसार हालसम्म संक्रमित सबै’को स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ । उनिहरु १८ बर्षदेखि ४६ बर्ष’सम्मका रहेका छन् । हालसम्म ३६ जना कोरोना ‘पोजेटिभ भएका निको भएर घर फर्किसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी मोरङमा पनि एक संक्र’मित थपि’एका छन् । त्यस्तै भैरहवाको प्रयोग’शालामा भएको परीक्षणमा गुल्मीका एकजना ४१ बर्षीय पुरुषको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ भने धुलि’खेलमा गरि’एको परीक्षणमा ४ जनामा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको छ ।
प्रवक्ता देवको’टाका अनुसार धुलिखे’लमा गरिएको परीक्षणबाट जनकपुरका १ , रौतहटका १, दाङ्गक १ र धादिङका १ जनामा सं’क्रमण पाइएको छ । उनीहरु सबैको उमेर १८ देखि ४६ बर्षको छ ।
यसरी संक्र’मित पुरुष’को संख्या २ सय ९८ पुगेको छ भने ५९ महिला रहेका छन् । यस्तै संक्रमित जिल्ला पनि ३१ पुगेको छ । अहिलेसम्म संक्रमितमध्ये ३६ जना निको भइस’केका छन् भने २ जनाको ज्या’न गएको छ । – न्युज२४ नेपाल
Prev‘लकडाउनमा’ तरकारी किन्न गएका युवक बेहुली लिएर फर्किएपछि….
Nextचितवनको रवि/रञ्जना घटना’ फेरी उठ्यो, रञ्जनाकी देउरानी यस्तो भन्दै आइन् (भिडियोसहित)
राजतन्त्र फर्काउने भन्दै राजावादीहरु ओर्लिए सडकमा….. हेर्नुहोस्
प्रकाश सपुत लेख्छन्: ‘सरकार यो जुनीमा म ‘मान्छे’ मानिन्छु कि मानिन्न’ ?
६ गर्भ’वती युवतीको टोली लिएर साथीको विवाहमा पुगेका युवकले भने-‘यी सबै बच्चाको बाउ म हुँ’
सुन्दर युवती र नेपाल आर्मीका सिपाहीको यो भाईरल भिडियो लाखौंले हेरे (भिडियो सहित) (67381)